Uhlela i-Carnival Cruise esuka eFlorida Port Miami ngo-2021?
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-USA Izindaba Ezintsha » Uhlela i-Carnival Cruise esuka eFlorida Port Miami ngo-2021?
Uhambo lokuzijabulisa • Ukuhamba ngesikebhe • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Inkulumo Yezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene
ICarnival Cruise Line ivula kabusha iPort Miami ngoJulayi 4
Ukuhamba ngeCarnival Cruise usuka ePort Miami kuvame ukuphawula ukuqala kweholide elihle kubantu abaningi baseMelika. “Sijabule kakhulu ukubuya kwethu! “, Kusho uCarnivalCEO u-Arnold Donald namuhla.
Iseyili enkulu yeCarnival Horizon isanda kwesokunxele ngoJulayi 4
I-Carnival Cruise Line iqale uhambo lwayo lokuqala kusukela cishe ezinyangeni eziyi-16 ukusuka ePortMiami, iThe Cruise Capital of the World, namuhla ngokusuka kweCarnival Horizon, okunikeza umfutho omkhulu emnothweni wendawo kanye nasemisebenzini eyishumi eSouth Florida esekelwa yi imboni yezikebhe.
Ukuqala kabusha kwenkonzo kaCarnival eMiami kunikeza izivakashi iholidi elilindelwe kakhulu futhi kuyisikhuthazo esithe xaxa emnothweni wakuleli nakulo lonke izwe.
IFlorida iyindawo yokuqala esizweni ekuqaliseni ukuhamba ngomkhumbi kanti imboni yezikebhe inikela ngaphezu kwe- $ 9 billion ekuthengeni ngqo futhi ibhekele imisebenzi engaphezu kwe-159,000.
EMiami-Dade kuphela, umsebenzi wokuhamba ngesikebhe ukhiqiza cishe imali eyizigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ 7 kanye nemisebenzi engama-40,000 ngonyaka. Emisebenzini esekelwa izimboni ezingama-437,000 e-USA, cishe ama-37% aseFlorida.
UMongameli weCarnival Cruise Line uChristine Duffy, uMongameli weCarnival Corporation, kanye no-CEO u-Arnold Donald, kanye neNxusa leCarnival Brand uJohn Heald baqale le mikhosi ngomcimbi wokusika iribhoni bemukela ngokusemthethweni izivakashi ezazisemkhunjini.
“IPortMiami iyikhaya lethu lokuqala ekhaya ngokuya ngemikhumbi kanye nokuqalwa kwabagibeli kanti ukubuyela esikebheni namuhla neCarnival Horizon kumelela isinyathelo sokuqala esibalulekile sokubuyisela inkampani yethu ebhizinisini ngenkathi ifaka imali ebidingeka kakhulu ezinkulungwaneni zabasebenzi abathembele kulesi sikebhe ezimbonini ukuze baziphilise, ”kusho uDuffy. "Unyaka odlule ube yinselelo ukusho okuncane futhi ngifisa ukubonga izikhulu zethu zombuso nezasekhaya, iPortMiami, nabalingani bethu bebhizinisi kanye nabahlinzeki bethu ngokusixhasa nokubekezela kwabo ngalesi sikhathi."
“Ukuqala kabusha kwemikhumbi ehamba ngemikhumbi evela eMiami wusuku olujabulisayo kubadobi bezinhlanzi baseMiami. Sinamalungu acishe abe ngu-800 ePortMiami futhi umholo wabo wehle cishe u-80% ngesikhathi sokumiswa cishe kwezinyanga eziyi-16. Namuhla ngomkhumbi wokuqala weCarnival Horizon, sibuyela emsebenzini futhi sesibheke ukuxhasa imindeni yethu futhi, ”kusho uTorin Ragin, umongameli, we-International Longshoremen's Association (ILA) Local 1416.
ICarnival Horizon izohamba ngomkhumbi namuhla ngo-4 ntambama ngomkhumbi wezinsuku eziyisithupha onama-Amber Cove (eDominican Republic) nasesiqhingini sangasese saseBahamian iHalf Moon Cay.
Ngaphezu kokuhamba kukaCarnival Horizon namhlanje ntambama, uCarnival Vista uhambe eGalveston izolo, kwathi uCarnival Breeze wasuka eGalveston ngoJulayi 15 kwathi iCarnival Miracle yaqala isizini yalolayini kusukela eSeattle Julayi 27. Mardi Gras, umkhumbi omusha walayini, usuka ePort Canaveral ngoJulayi 31. Eminye imikhumbi emikhunjini yeCarnival izoqala ukusebenza ngo-Agasti.
Umhlaba ububukeka ufiphele ngoJanuwari lapho iCarnival ikhansele yonke imikhambo ezayo kuze kube nguMashi 31- futhi lokhu bekuyisiqalo nje.